Yeremia 18 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Dɔte wɔ ɔnwemfo nsam (1-12)
Yehowa de n’akyi bɛkyerɛ Israel (13-17)
Wɔbɔɔ Yeremia ho pɔw; Yeremia adesrɛ (18-23)
18 Asɛm a efi Yehowa hɔ baa Yeremia nkyɛn ni: 2 “Sɔre na sian kɔ ɔnwemfo+ fi, na ɛhɔ na mɛma woate me nsɛm.” 3 Enti misian kɔɔ ɔnwemfo fi, na na ɔreyɛ adwuma wɔ ɔnwemfo afiri so. 4 Nanso kuku* a na ɔnwemfo no de dɔte reyɛ no sɛee wɔ ne nsam. Enti ɔnwemfo no san de dɔte no yɛɛ kuku* foforo sɛnea ɔpɛ.* 5 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ: 6 “‘O Israel fi, merentumi nyɛ mo sɛnea ɔnwemfo yi ayɛ yi anaa?’ Yehowa asɛm ni. ‘Hwɛ! sɛnea dɔte te wɔ ɔnwemfo nsam no, saa ara na mo nso mote wɔ me nsam, O Israel fi.+ 7 Bere biara a mɛka sɛ metutu ɔman anaa ahenni bi ase na madwiriw agu asɛe no no,+ 8 sɛ saa ɔman no gyae ne bɔne a mekasa tiae no a, me nso, mmusu a mabɔ me tirim sɛ mede bɛba wɔn so no, mɛsesa m’adwene.*+ 9 Na bere biara nso a mɛka sɛ mɛkyekye ɔman bi anaa mɛhyehyɛ ahenni bi no, 10 sɛ wɔyɛ bɔne wɔ m’ani so, na wɔantie m’asɛm a, adepa a mabɔ me tirim sɛ mɛyɛ ama wɔn no, mɛsesa m’adwene.’* 11 “Enti mepa wo kyɛw, ka kyerɛ Yuda mmarima ne Yerusalemfo sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Hwɛ, mereboaboa mmusu bi ano* aba mo so, na mabɔ pɔw bi atia mo. Mesrɛ mo, montwe mo ho mfi mo akwammɔne ho, na monyɛ mo akwan ne mo nneyɛe yiye.”’”+ 12 Nanso wɔkae sɛ: “Ɛho nhia!+ Efisɛ nea yɛn adwene yɛ yɛn na yɛbɛyɛ,* na obiara bɛyɛ asoɔden ayɛ nea ne koma pɛ.”+ 13 Enti nea Yehowa aka ni: “Mesrɛ mo, mo ara munkobisa wɔ amanaman no mu. Hena na wate saa ade yi bi pɛn? Israel ɔbaabun no abɔ mmusu.+ 14 Sukyerɛmma betumi asã wɔ Lebanon mmepɔw so abotan so anaa? Na nsu a ɛyɛ nwini a ɛretene fi akyirikyiri betumi ayow anaa? 15 Nanso me man werɛ afi me.+ Efisɛ wɔbɔ afɔre* ma ade a mfaso nni so,+Na wɔma nnipa hintiw wɔ wɔn akwan mu, tete akwan no so,+Na wɔma wɔfa mfikyikwan a ɛso yɛ mmonkyimmɔnka so,* 16 Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn asaase no bɛyɛ biribi a ɛyɛ hu,+Biribi a nkurɔfo bedi ho fɛw* daa.+ Obi biara a obetwam wɔ hɔ no bɛtɛɛ n’anom ahwɛ, na wawosow ne ti.+ 17 Mɛyɛ sɛ apuei mframa, na mabɔ wɔn ahwete atamfo anim. Wɔn amanehunu da no, mede m’akyi na ɛbɛkyerɛ wɔn, na ɛnyɛ m’anim.”+ 18 Na wɔkae sɛ: “Mommra, momma yɛnkɔbɔ Yeremia ho pɔw,+ efisɛ mmara* renyera mfi yɛn asɔfo nkyɛn, na afotu remfi anyansafo nsam, na asɛm rempa adiyifo anom. Mommra, momma yɛnkasa ntia no,* na mommma yenntie nea ɔreka no.” 19 O Yehowa, yɛ aso ma me,Na tie nea m’atamfo rekeka no. 20 Bɔne na yɛde tua papa ka anaa? Nanso wɔatu amoa ama me nkwa.*+ Kae sɛnea migyinaa w’anim kaa asɛmpa faa wɔn hoSɛ dan w’abufuw fi wɔn so no. 21 Ɛno nti, fa wɔn mma hyɛ ɔkɔm nsa,Na fa wɔn hyɛ sekan* nsa.+ Ma wɔn yerenom mma nwuwu, na wɔnyɛ akunafo nso.+ Ma owuyare nkunkum wɔn mmarima,Na wɔmfa sekan nkunkum wɔn mmerante wɔ ɔko mu.+ 22 Ma akorɔmfo werɛmfo mmra wɔn so mpofirimNa wɔnte osu wɔ wɔn afi mu. Efisɛ wɔatu amoa de repɛ me ayi me,Na wɔasunsum mfiri ama me nan.+ 23 Nanso wo, O Yehowa,Wunim pɔw a wɔabɔ wɔ me ho sɛ wobekum me no.+ Nkata wɔn bɔne so,Na mpopa wɔn bɔne mfi w’anim. Sɛ wotwe wɔn aso wɔ w’abufuw mu a,+Ma wonhintiw wɔ w’anim.+
^ Nt., “sɛnea ɛfata wɔ ɔnwemfo no ani so sɛ ɔbɛyɛ”
^ Anaa “menu me ho.”
^ Nt., “mereyɛ mmusu bi.”
^ Anaa “yebedi yɛn ankasa nsusuwii akyi.”
^ Anaa “wɔhyew afɔrebɔde.”
^ Anaa “mfikyikwan a wɔmpaee so.”
^ Nt., “yɛmfa yɛn tɛkrɛma mmoro no.”
^ Anaa “sekan tumi.”